Home Wararka DEG DEG:Kooxo hubeysan oo dil Goordhow ka geestay Muqdisho
DEG DEG:Kooxo hubeysan oo dil Goordhow ka geestay Muqdisho
War deg deg ah oo hada nasoo gaaray ayaa sheegay in agagaar Bosteejada Daallo ee Hawlwadaag lagu dilay ruux halkaasi ku sugnaa,sida ay inoo xaqiijyeen goob joogayaal.
Goobjoogayaasha ayaa inoo sheegay in ruuxa la dilay oo marayay meel aan ka fogeen Bosteejada daallo ,waxaana la sheegay inay dilka kadib goobta ka baxsadeen.
Ciidamada dowlada ayaa goobta gaaray waxayna ka bilaabeyn baaritaan ay ka baadi goobayaan shaqsiyaadi dilka ka danbeeyay.
Maamlahaan danbe waxaa sii xoogeeesanaya dilalka ka dhacaya Magaalada Caasimada ah ee Muqdisho , iyadoona joogta ay ka noqdeen.
Previous articleWasiirka Gaashaandhiga iyo Agaasimaha Madaxtooyada oo booqasho ku tagay Xarunta Tababarada General Gordan+Sawiro
Next articleMuqdisho oo Amni Xumo darteed Habeenkii wax dhaqdhaqaaq ah uusan ka Jirin iyo Cabsi Taagan!!
Webiga oo markale ku fatahay Beledweyne iyo barakac xoogan oo bilaawday
Xaalad aad u adag oo ka taagan Magaalada Muqdisho (Shacabka oo...